Maalinta: Maarso 29, 2019
Garoonka diyaaradaha ee Antalya
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa bixin doonta amniga wadooyinka ee madaarada diyaaradaha FOD radar iyo nidaamyada kamaradaha horumarsan ee laga sameeyay gudaha iyo dalka. [More ...]
Eurasia Railway si loo dhiirrigeliyo xubnaha Muhiimka ah ee Guddoomiyaasha iyo Wakiilada
Turkiga oo kaliya iyo 3 ee dunida ugu weyn. Eurasia Railway, Tareenka Caalamiga ah iyo Nidaamyada Tareenka iyo Nadaafadda Suuqa, waxay marti galin doonaan marti-galiyeyaasha muhiimka ah iyo kuwa ku hadla oo u dhexeeya April 10-12 oo ku yaal aag cadaalad ah ee Izmir. [More ...]
Kahramanmaras North Ring Road Road ayaa la adeegsaday
Duqa Magaalada Kharmanmaraş Fatih Mehmet Erkoç, ayaa soo gabagabeeyey dhismaha qeyb weyn oo ka mid ah Wadada 'Northern ring Road' oo lagu soo booqday iyo xafiisyada xafiisyada. Dhismaha Dawladda Hoose ee Magaalada Kahramanmaraş ayaa billowday kuna dhammaatay si aad ah. [More ...]
5 Thousand Ton Asphalt ilaa Arifiye iyo Sapanca
Oktar wuxuu caddeeyey inay sii wadeen barnaamijka asfilitka ee Arifiye ka dib Sapanca oo wuxuu yidhi, tar waxaan wadnay qiyaastii 2 kiiloomitir Sapanca. Arifiye, wadada 3-kiiloomitir ayaa laamigaabi doonaa. Baaxadda hawlaheena [More ...]
Amaanka Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, GaadiidkaPark A.Ş. TransportationPark, oo ahmiyad siiya nabadgeliyada rakaabka, waxay bixisaa dhamaan noocyada aaladaha raajada tayo sare leh dhamaan albaabada laga soo galo. [More ...]
Diiwaangelinta Tayada ee ESHOT
Natiijadii ka soo baxday xisaab xirkii TSE, Agaasinka Guud ee ESHOT, oo bixiya adeegyada gaadiidka dadweynaha ee leh giraangiraha caagga ah ee ku yaal degmada İzmir ee Magaalo Weyn, wuxuu xaq u leeyahay inuu helo shahaadada nidaamka 4 iyo caalami ahaan loo ansaxiyay Q IQNET Shahaadada ayrı ee qeybaha kala duwan. ESHOT [More ...]
Xulashada Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir
31 Sababtoo ah Doorashada Guud ee Maamulada Degmooyinka in la qabto Axadda, talaabooyin isdaba joog ah ayaa laga qaaday degmada İzmir ee Magaalo Weynta Gaadiidka Dadweynaha. Baska, hareeraha magaalada, metro, taraamka iyo doonta doonta ee Axadda Izmir [More ...]
Maareeyaha Guud ee Arikan booqashadiisa Turkish Transport-Sen
Gaadiidka TCDD Co. Maareeye ku-xigeenka guud Erol Arıkan, Madaxa Waaxda Kheyraadka Aadanaha Dursun Kızılbuğa, Madaxa Waaxda Horumarinta Istaraatiijiyadda Safi Çatal iyo Madaxa Xisaabaadka iyo Waaxda Maaliyadda Atilla Karataş, Turkiga [More ...]
Barayaasha waxay booqdaan TÜVASAŞ
Qaab dhismeedka qaababka ulaşma ee lagu helo macluumaadka ilo-wareedyada aasaasiga ah, kormeerka goobta, helitaanka khibradda iyo bixinta waxbarasho joogto ah ”barnaamijka ay fulisay Wasaaradda Waxbarashada Qaranka; Agaasinka Gobolka ee Sakarya maamulayaasha iyo macalimiinta waxbarashada [More ...]
200 Sanduuqa Taariikhihii Taariikhihii Taariikhihii Taariikhda ee Ünye Gölevi in ​​la dhigo
Iyadoo la ilaalinayo qiimaheeda taariikhiga ah iyo dhaqankeeda, Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu waxay wadaysaa buundada dhagaxa taariikhi ah ee Degmada Gölevi ilaa Atatürk Park ee degmada sababtoo ah howlaha wadooyinka ee laga sameeyo degmada districtnye. Buundada ayaa laga saaray meesha ay hadda ku taal [More ...]
RayHaber 29.03.2019 Warbixinta Shirka
Kontray U Shaqeynta Shaqaynta
Xarunta Horumarinta Isku-xirka Smart Card ee laga bilaabay Adana
Hüseyin Sözlü, Duqa Magaalada Magaalada Adana iyo Murashaxa Isbahaysiga Jamhuuriga, ayaa u qorsheeyay baska degmadu inay si joogto ah u sii wadaan macaamillada kaararka smart-ka ah ee mobilada isla markaana ay u qaadaan adeegga muwaaddinka gaadiidleyda magaalada. [More ...]
Golaha Dhalinyarada ee IMM 'Nursery' ee Adeega Carruurta
Golaha Dhallinyarrada "BBB wuxuu gacan ka geystaa horumarinta iyo is dhexgalka carruurta ee deegaan kale oo ka tirsan degmada 39 ee magaalada Istanbul iyadoo leh" Xannaanada oo ka kooban basas hal abuur leh. Xanaanada caruurta siisa adeegyo xanaano guur guura; Mawduucyo kala duwan iyo qalab [More ...]
Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalo Weyn ayaa la soo saaray nidaamyada 'Smart City' Kahramanmaraş, oo ay diyaarisay buugga "Smart Cities Book Buuga" ayaa dhacay. Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalooyinka buugaagta ee magaalooyinka caqliga leh oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka iyada oo laga duulayo xafiiska Madaxweynaha. [More ...]